Manni Murtii Idil Addunyaa-ICJ’n duguuggaa sanyii Muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatame ilaaluu kan jalqabu tahuu beeksise | NuuralHudaa
Categories: Eeshiyaa Odeeyfannoo
Manni Murtii Idil Addunyaa-ICJ’n duguuggaa sanyii Muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatame ilaaluu kan jalqabu tahuu beeksise
Manni Murtii Idil Addunyaa International Court of Justice (ICJ) jedhamu, duguuggaa sanyii Muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatame ilaalchisee, himannaa yakkaa Gaambiyaan mootummaa Miyanmaar irratti bante ilaaluu kan jalqabu tahuu beeksise. Haaluma kanaan manni murtichaa himannaa kana December 10-12/2019tti dhageefachuuf kan beellame yoo tahu, mootummaa Miyanmaarifis xalayaan waamichaa kan ergame tahuun beekamee jira.
Kanuma hordofuun Jilli Mootummaa Miyanmaar Aang San Suchiitiin hogganamu gara The Hague kan imalu tahuu odeeyfannoon argame ni addeessa.
Manni Murtii Haqa Idil Addunyaa ICJ’n dhimmoota biyyoota lama jiddutti ka’an kan ilaalu yoo tahu, biyyiti Lixa Afrikaa Gaambiyaan Gamtaa Biyyoota Islaamaa 57 bakka bu’uun torbaan tokko dura himannaa kana kan bante tahuu ibsame. Ogeeyyonni seeraa mootummaa Gaambiyaa himannaa dhiheessaniin, Mootummaan Miyanmaar karooraa fi haala qindaaween muslimoota Rohingiyaa irratti bara 2017 irraa eegalee yakka duguuggaa sanyii raawwataa jiraachuu ibsuun, manni murtichaa mootummaa Miyanmaar gocha kana irraa akka dhaabsisu gaafatan.